Dhacdooyinka Hawada: maxay yihiin iyo astaamahooda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 24/05/2021 09:25 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Waan ognahay in dhammaan lakabyada jawiga ay jiraan oo keliya ifafaalooyin hawo ku jira dhulka loo yaqaan 'troposphere'. Ku ifafaale hawadeedka Waxay ka dhacaan adduunka oo dhan waxayna ku tiirsan yihiin xaddiga shucaaca qoraxda, heerka u janjeera falaadhaha qorraxda, cadaadiska jawiga, nidaamka dabaysha, heerkulka iyo doorsoomayaal kale oo badan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa maxay yihiin ifafaalaha ugu weyn ee jawiga jira iyo astaamaha lagu garto.
1 Dhacdooyinka Hawada
1.1 Duufaanno, duufaanno, iyo duufaanno
1.2 Baraf iyo baraf
2 Ifafaaleyaasha cimilada iyadoo loo eegayo nooca daruurta
3 Dhacdooyinka kale ee jawiga
3.1 Qaanso roobaad
Duufaanno, duufaanno, iyo duufaanno
Waxay yihiin khalkhal xagga cimilada ah, oo ay weheliyaan dabayl, onkod iyo hillaac iyo roob culus. Waxay soo saaraan daruuro gaagaaban, daruuraha loo yaqaan cumulonimbus. Waxay ka kooban tahay heerar hoose oo hawo aad u kulul oo hawo ku filan leh ama hawo joog sare leh (mararka qaarkood labadaba).
Roobku wuxuu dhacaa marka daruuraha ay soo ururaan si ay u sameeyaan dhibco waaweyn oo waaweyn oo biyo ah, oo ay hawadu xiranto. Markay daruurahani aad u cuslaadaan, biyuhu waxay ku dhacaan cuf isjiidad awgood waxayna sababi doonaan roob, taas oo lagu macneeyay daadinta ama roobab dhibicyo biyo ah oo u nugul uumiga biyaha ee cimilada.
Duufaanta waxay u dhigantaa niyad jab yar ama duufaan, laakiin xoojin weyn, taas oo dhalisa eddy muuqda oo la yiraahdo Chimney oo ka soo dhaca daruuraha hooyo duufaan. Iyadoo la adeegsanayo magaca Duufaanta, Duufaan ama duufaan, iyadoo ku xiran aagga, waxaa loogu yeeraa xarun cadaadis aad u hooseeya oo aad loo sheego, oo leh dabeylo xoog leh iyo roobab. Badanaa waxay dhacdaa inta udhaxeysa 8º iyo 15º waqooyiga iyo koonfurta waxayna u dhaqaaqdaa dhanka galbeed.
Dhexroorka tornaadooyinka wuxuu ku kala duwanaan karaa dhowr mitir ama tobanaan mitir illaa boqolaal mitir. Dabaysha ka dhalata duufaan wey xoog badnaan kartaa. Cadaadisku si weyn ayuu uga dhacayaa banaanka ilaa bartamaha duufaanka, taasoo keeneysa in hareeraha wareegga lagu nuugo aagga cadaadiska hoose ee hoose, halkaasoo aagga cadaadiska yar uu ku fido isla markaana si dhakhso leh u qaboojiyo, badanaa qaabka qulqulka, sameynta masrax la arki karo oo caadi ah. Cadaadiska hoose ee wareegga ayaa soo qaadi doona qashin, sida jajabka wasakhda ama waxyaabo kale, oo lagu qaadi doono isla markaana ku duuli doona waddadiisa, taasoo ka dhigaysa duufaanta inay u muuqato mid madow.
Baraf iyo baraf
Duufaanku waxay ku bilaabmaan dabaylo xoog leh heerkulkuna aad buu u hooseeyaa, dabaylo xoog leh ayaa markaa jiidaya dhibco badan oo biyo ah, marka la qaboojiyo waxay soo saari kartaa roob dhagaxyaale ama roob dhagaxyaale ah oo gaari kara dhowr sentimitir dhexroor. Waxaa lagu qeexay inay tahay roob xoog leh oo ay sameeyeen culeysyo baraf ah oo goos goos ah, midab leh ama biconvex ah.
Marka heerkulku ka hooseeyo 0ºC, baraf barafka ayaa bilaabanaya inuu soo dhaco. Jajabkaani wuxuu ka kooban yahay kristantarro yaryar oo baraf ah oo heerka dhicitaankoodu aad ayuu u hooseeyaa.
Ifafaaleyaasha cimilada iyadoo loo eegayo nooca daruurta
Hawada kulul ee kor ugu kacaysa heerka ugu sareeya ee jawiga ayaa si tartiib tartiib ah u qaboojiso kolba markay kacdo, taas oo keenaysa uumiga biyaha inuu isku soo ururiyo dhibco yaryar, samaysana daruuro
Daruuruhu waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan ee cimilada oo badanaa waa kuwa ugu muuqda. Muuqaalka ifafaalahaani waxaa saameeya dhowr arrimood oo kuleylka ah, kuwaas oo asal ahaan la xiriira huurka, cadaadiska iyo heerkulka, laakiin tani ma baabi'inayso xaqiiqda ah in marka la go’aaminayo muhiimaddeeda. Dhacdadu waxay leedahay shahaado cayiman oo mawduuc ah sababtoo ah dabeecadda jireed iyo ficil toos ah. Markaad dejineyso heerarka noocyada daruuraha kala duwan iyo muuqaalkooda, ka fiirinta dhulka ama dayax gacmeedyada ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee xukunka.
Waxaa jira 3 nooc oo daruuro waaweyn ah sida ay u egyihiin iyo cawaaqibka:
Cirrus: Waa daruuro ka soo muuqanaysa jooggoodu weyn yahay; waa dhuuban yihiin, jilicsan yihiin, qaabdhismeed xajmi leh; badanaa baalallay oo had iyo jeer cad.
Daruuraha cumulus: Waxay yihiin daruuro had iyo jeer u muuqda sida cufnaanta daruuraha shakhsiga ah, oo leh saldhig fidsan, oo si isdabajoog ah ugu soo baxa foomka domes taagan, oo qaabdhismeedkoodu u eg yahay kan ubaxyada, iyagu waa daruuraha caadiga ah, cad cad ee meelaha u muuqda Qorraxda iyo cirro mugdiga kuwa hadhka leh.
Strata: Waa daruuro fidiya qaab lakab ah, daboolaya dhammaan, ama qayb ballaaran oo samada ah. Nooca 'stratum' guud ahaan wuxuu ka kooban yahay lakab daruur oo isdaba-joog ah oo laga yaabo inuu soo bandhigo dildilaaca qaarkood, laakiin joogitaanka unugyada daruuraha shaqsiyeed lama kala saari karo, taas oo ah, waa bangiyo isku mid ah oo daruuro ah oo keena roob iyo qulqulaya, aad u baahsan oo leh labis qaabdhismeed. Nimbus: (daruuro hooseeya, daruuro roob madow oo cirro leh).
Dhacdooyinka kale ee jawiga
Dhacdooyinka Hawada kuma koobna oo keliya roobab iyo walxo la xiriira daruuraha. Aan aragno noocyada kale ee ifafaalaha jawiga:
Waa mid ka mid ah ifafaalaha ugu caansan uguna quruxda badan ee ka dhaca cirka. Waxay dhacaan markay roob da’aan, marka dhibcaha roobku u shaqeeyaan sida muraayadaha oo kale, oo iftiinka u kala firdhiya dhinacyada oo dhan, kala daadanaya oo samaynaya qaanso roobaadka. Tan waxaa sameeya qaansada ay sameyso falaadhaha qorraxda ee ku dhaca dhibicda biyaha iyo kala firdho xagal ~ 138 darajo ah. Iftiinka ayaa soo gala dhibicda, ka dib dib ayuu u rogaa, ka dib wuxuu u dhaqaaqaa dhinaca kale ee dhibicda oo wuxuu ka tarjumaa dusha sare ee gudaha, ugu dambeyntiina wuxuu dib ugu noqdaa iftiinka dillaacay markii uu ka baxayo dhibicda. Qaanso roobaadka badanaa wuxuu socdaa 3 saacadood waxaana had iyo jeer lagu arkaa jihada ka soo horjeedda qorraxda.
Auroras waa ifafaalooyin ka dhaca latitude-yada u dhow tiirarka birlabta ee magnetka maxaa yeelay waxaa soo saaray isdhexgalka ulaha birlabta birlabta iyo walxaha ay wataan dabaysha qoraxda. Marka walxaha ay soo gaaraan dhulka, waxay ku dhacaan molikuyuullada ku jira jawiga sare, iyaga oo xiiso geliya (ionizing them), xaqiiqo soo saarta aurora caan ah. Waxay kuxirantahay cirifka ay kujiraan, waxaa loogu yeeraa waqooyiga ama koonfurta auroras. Caadi ahaan, aurora waxaa lagu arki karaa oo keliya meelaha sare ee 65º (tusaale, Alaska, Kanada), laakiin xilliyada lagu jiro firfircoonaanta qoraxda ee firfircoon (sida duufaanta qorraxda), xitaa waxaa laga arki karaa meelaha hooseeya ee 40 around. Dhacdooyinkaani waxay socon karaan illaa saacad, haddii ay firfircoon yihiinna, waxay socon karaan habeenka oo dhan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ifafaalaha ugu weyn ee jawiga jira iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhacdooyinka Hawada